Hụrụ agụba & fingure joint cutter Factory - China Saw agụba & fingure joint cutter Manufacturers, Suppliers
Video nke ngwaahịa arụmọrụ
Industrial agwụ ike ibe n'ibe
carbide Mgbabere na-agwụ ike ibe n'ibe
Dowel malite ịgba (Brade point drill bits)
Site oghere carbide u
Ugboro carbide na mma nhazi
Ebube Carbide maka njirimara
Carbide Planner mma
Carbide mma na-agbanwe agbanwe
Carbide na-egwu egwu na mma
Carbide ntụgharị mma
Hụrụ agụba & fingure nkwonkwo cutter
Carbide mkpịsị aka nkwonkwo cutter maka osisi
PCD hụrụ agụba na TCT hụrụ mma
PCD okirikiri hụrụ agụba
HAN-C ngwaọrụ nwere 10 afọ ahụmahụ otutu Design & n'ichepụta ga-eme ka gị woodworking nnọọ mfe！
Solid carbide dowel u ...
HW dowel u na 3 cutt ...
PCD Isiokwu Hụrụ Agụba
Mkpịsị aka nkwonkwo cutter maka bui ...
TCT mgbabere uzo na-agwụ ike ibe n'ibe
4 Flutes elu arụmọrụ t ...
4 flutes ulo oru dowel d ...
Mkpịsị aka nkwonkwo cutter maka ụlọ-160 × 60-4T
4 Ezé na tungsten carbide, ihe anụ ahụ bụ 65Mn, HRC40-42;
Adabara nhazi: rere ure osisi, adịghị, mbọ na ndị ọzọ na ezi arụmọrụ ọnwụ
TCT otu rip hụrụ agụba maka Solid Wood Cutcha okirikiri hụrụ agụba
TCT Single rip he he Saw Blade is for solid osisi ma ọ bụ ihu trimming tupu gbakọta. Super imecha ogo larịị dị nro na osisi siri ike. Nke nwere pụrụ iche nha nha udi enyere a fọrọ nke nta mma akara free ịkpụ imecha, adabara Edge trimmer, otu rip-ịkpụ hụrụ igwe, moulder na table hụrụ wdg sequdi sanding ma ọ bụ planing nwere ike belata. Ihe ndi ozo na teknụzụ na-akwado ndu ogologo oge.
Mpempe akwụkwọ okirikiri na-ahụ maka agụba maka mbadamba
A na-eji agụba ahụ maka otu na mpempe akwụkwọ ndị a na-ahụ maka ihe ndina na mkpuchi (dị ka chipboard, MDF na HDF). The kachasị nha nha profaịlụ mma ọnwụ àgwà, kwụsie ike dị ike, ndị cutter isi bụ ihe na-eyi na-eguzogide ọgwụ na ọnwụ bụ ihe mụ.
TCT Panel Sizing okirikiri Hụrụ pupụtara N'ihi laminated osisi
PCD lamello cutter maka osisi
Enwere ike ịnye onye cutter a ka ọ daba n'ime obere igwe ejiri aka Lamello nwee ike tinye ya na arbor iji mee ya na igwe CNC. Akwadoro maka nkuku uzo na nkwonkwo ogologo na osisi siri ike, nke ejiri MDF na -emepụta ya na laminated ya.
PCD Hụrụ UM UBARA bu nke ihe PCD na igwe nchara, site na igbutu laser, brazing, egweri na usoro mmeputa ndi ozo. A na-eji ha maka igbutu ihe mkpuchi ala laminate, mbadamba akara aka, bọọdụ eletriki, bọọdụ nkwụnye ọkụ, plywood na ihe ndị ọzọ.
Machines: Isiokwu hụrụ, doo hụrụ wdg.